Tun Tun's Photo Diary: June 2015
16-Aug-2012 , Langkawi Cable car စီးပြီး Oriental Village ကနေ Eagle Square ကို သွားပါတယ်။ ပြီးတော့ Eagle Square ကနေ Ferry စီးပြီး Penang ကိုသွားမှာပါ။ Oriental Village နားမှာ အပျော်တမ်း စီးတဲ့ မော်တော် ဘုတ် တွေ အခုလို ရပ်ထားတာ အများကြီးတွေ.ရပါတယ်။ မီသားစု လိုက် အဖွဲ.လိုက် ငှားပြီး စီးရင် အရမ်းပျော်ဖို. ကောင်းမှာပဲ။
at 6/30/2015 08:09:00 AM Links to this post No comments:
Labels: Langkawi, Malaysia, Penang, Sunset
at 6/22/2015 03:31:00 AM Links to this post No comments:
at 6/18/2015 06:52:00 PM Links to this post 1 comment:
2015-Jun-10 ရက်နေ.က စင်ကာပူနိုင်ငံ Jalan Besar Stadium မှာ ကန်တဲ့ မြန်မာ နဲ. ကမ္ဘောဒီးယား ပွဲကို ကိုယ်တိုင် သွားကြည့်ဖြစ်တယ်။ ဘောလုံးပွဲ ကို ကွင်းထဲမှာ ကြည့်ဖူးတာ ဒါ ပထမဆုံးပဲ။ လက်မှတ် ကို အွန်လိုင်းကနေ၀ယ်တာ မြန်မာ ဘက်ပွဲကြည့်စင်က ၀ယ်မရလို. ကမ္ဘောဒီးယား ဘက်ကနေ ၀ယ်ပြီး သွားကြည့်ခဲ့တယ်။
at 6/12/2015 08:54:00 AM Links to this post No comments:
Labels: Cambodia, Event, Myanmar, Singapore, Sport
at 6/06/2015 03:57:00 AM Links to this post No comments:
Langkawi Trip, Cable Car Ride and Oriental Village...
28th SEA Games, Myanmar Vs Cambodia Football Match...